Facebook Post ကို Shareable လုပ်နည်း - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2021 Saadiya Munir အာရအလွတ်, B2B, စတင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအလွတ်တန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, တရုတ်အလွတ်, အသားပေးသတင်းများ, FGG တန်ဖိုးနည်းစျေးကွက်, Freelance Global Gigs (FGG) စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း, ပြင်သစ်အလွတ်တန်း Gigs, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကားအွန်လိုင်း, ဟိန်ဒီအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲ, အင်ဒိုနီးရှားအလွတ်တန်း Gigs, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်, ပေါ်တူဂီအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲ, ရုရှားအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများ, B2B အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်, လက်ကားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်, စပိန်အလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများ, နည်းပညာ, လက်ကား, လက်ကား - B2B, လက်ကား & B2B စျေးကွက်, လက်ကားစျေးကွက်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း
ကုမ္ပဏီများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်ခုတည်းထက်သာလွန်ရန်သာလိုအပ်သည်
Facebook သည်လူအများနှင့်အကြံဥာဏ်များနှင့်အဆိုပြုချက်များကိုဝေမျှပေးသောဗဟိုအချက်အချာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့၏မက်ဆေ့ခ်ျများကို Facebook ထက်သာလွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် ၎င်းသည်ပရိသတ်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးတုံ့ပြန်မှုအများဆုံးရရှိလိမ့်မည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အကြောင်းအရာများကိုအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဝေမျှကြသည်။ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာသည်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောသတင်းစကားအချို့ပါဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်ကြီးလေးသောပြissueနာနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာသို့မဟုတ်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအကြောင်းလည်းပြောကောင်းပြောလိမ့်မည်။ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်မကြာသေးမီကမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်သင်ရေးသားချက်များကိုဖန်တီးရန်နောက်ခံအမျိုးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤသည်အကြီးမြတ်ဆုံးပရိသတ်ကိုပိုမိုကြည့်ရှုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
သင်အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တင်ထားလျှင်သင်၏အသိအကျွမ်းများသည်သူကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ သူတို့က ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင်မျှဝေချင်ပေလိမ့်မည်။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်ထူးခြားသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ဝေမျှရန်လိုသည် သငျသညျတိကျတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
ပုံမှန်သီးသန့်တည်ရှိမှုဆက်တင်ကသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုသင်၏ပို့စ်များကိုသာကြည့်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်သည်သင်၏ရေးသားချက်များကိုအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန်တားဆီးစေသည်။ သင်၏တင်ပို့ချက်များသည်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ဖြန့်ရန်သို့မဟုတ်သင်ဖြန့်ကျက်ရန်အဆင့်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
သင် Shareable သောပို့စ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ရှည်လျား။ သတင်းအချက်အလက်များကိုရေးသားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လား။ မင်းအတွက်ခက်ခဲနေလား ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာအမြောက်အများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်? အကယ်၍ ရှိခဲ့လျှင်၊ “ မင်းဒါကိုမျှဝေလို့ရလား” ကိုသင်ရလိမ့်မည်။ အကြိမ်အနည်းငယ်တောင်းဆိုပါ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မျှဝေခြင်းအင်္ဂါရပ်ကကုမ္ပဏီများအား၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုမူလရင်းမြစ်မှဖြန့်ဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်တူညီသောအကြောင်းအရာကိုပြန်လည်တင်ခြင်းကိုရှောင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏စာမျက်နှာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မြှင့်တင်လိုလျှင်သင်မျှဝေနိုင်သောပို့စ်တစ်ခုထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။
၁။ စာမူတပုဒ်ကိုဖန်တီးပြီး Public setting သို့ပြောင်းခြင်း။ ၎င်းသည်မည်သူမဆို post ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်စာမူတပုဒ်ကိုအစောပိုင်းကထုတ်လုပ်ပြီးပါက၎င်းသည်၎င်း၏ privacy ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပို့စ်ကိုနှိပ်ပါ၊ privacy ချိန်ညှိမှုကိုအသာပုတ်ပြီး Public သို့ပြောင်းပါ။
သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်သင်၏လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ Facebook အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့ ်၍“ မင်းစိတ်ထဲဘာဖြစ်နေတာလဲ” ဆိုတဲ့စာသားအကွက်ကိုအသာပုတ်ပါ။
၁။ သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်သင်၏လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ Facebook အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့ ်၍“ မင်းစိတ်ထဲဘာဖြစ်နေတာလဲ” ဆိုတဲ့စာသားအကွက်ကိုအသာပုတ်ပါ။
၂။ မင်းနာမည်အောက်မှာစတုဂံလေးထောင့်ကွက်နှစ်ခုတွေ့လား။ ဤရွေ့ကား drop-down menu များဖြစ်ကြသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ“ သူငယ်ချင်း” နှင့်ဒုတိယမှာ“ + Album” ဖြစ်သည်။ ပထမ box ကိုနှိပ်ပြီး“ Public” option ကိုရွေးပါ။
၃။ သင်၏ပို့စ်ကိုဖြည့်ပါ၊ သင်ကြည့်ရှုလိုသည့်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်သင်ကြည့်လိုသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်“ မျှဝေပါ” ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏တင်ပို့ချက်ကိုအများပြည်သူမြင်နိုင်ပါပြီ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်အခြားသူများဖြစ်ပါစေ။ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအများပြည်သူသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ပရိသတ်ကိုသင်၏ပို့စ်ကိုမည်သူမဆိုနှင့်မျှဝေရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ အများဆိုင်စာမူများသည်မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Desktop ပေါ်ရှိ Facebook အတွက်ကွဲပြားမှုအနည်းငယ်နှင့်တော်တော်ဆင်တူသည်။
လူတွေကိုဝေမျှလိုတဲ့ post ကိုရှာပြီးကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့ညာဘက်ထောင့်ကအစက်သုံးခုကိုနှိပ်ပါ။
"Edit Post" ဆိုသည့် pop-up menu လေးကိုနှိပ်ပါ။
မီနူးမှ“ အများဆိုင်” ကိုရွေး။ နောက်ဆုံးသိမ်းဆည်းရန်ကိုနှိပ်ပါ။
ပို့စ်၏ privacy settings များကိုဖွင့်ရန်“ Save” ခလုတ်ဘေးရှိ drop-down menu ကိုနှိပ်ပါ။
Shareable လုပ်နိုင်တဲ့ Post တစ်ခုကိုဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲ။
အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသင်ဝေမျှသောအခါ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပေါ်မှပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရန်ကူညီသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်ယက်များအတွက်ရှာဖွေရေး algorithms ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သော့ချက်စာလုံးများ၏အပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ခက်ခဲစေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကို၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရွေ့လျားစေရန်အသုံးပြုနေသည်။ လူအများအပြားကသူတို့ကိုဝေမျှတဲ့အခါမှာ Facebook ရဲ့ algorithms ကမင်းရဲ့ post ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဖောက်သည်များကမျှဝေနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျှဝေခြင်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကြည့်ရှုသူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးစာမျက်နှာများသည်မှန်ကန်ပါကသင်၏ပို့စ်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်သည်။
သင်သည်လူကြိုက်များလိုသောလူမှုရေးလိပ်ပြာတစ် ဦး လော။ သို့မဟုတ်သင်၌အကြီးမားဆုံးသောရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည့်စီးပွားရေးစာမျက်နှာရှိပါသလား။ ဖေ့စ်ဘွတ်သည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုရယူရန်သင်လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကိုအောင်မြင်ဖို့ Facebook ကိုတင်ပြီးဘယ်လိုဝေမျှမလဲ။
ရှေ့မှာ post တစ်ခုထုတ်လုပ်ခြင်းမေးခွန်းအချို့ကိုစိတ်ထဲထည့်ထားရန်လိုသည်။
ဒီ privacy options ကဘယ်ဟာကိုမျှဝေခွင့်ပြုသလဲ။
Public option သို့သီးသန့်တည်ရှိမှုရွေးစရာကိုသင်မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။
သင်၏အနာဂတ်ပို့စ်များကိုမျှဝေရန်သင်၏ privacy တစ်ခုလုံးကို Public သို့မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မည်သို့မျှဝေမှုပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပြီးနောက်သင်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည် မြင်သာတိုးမြှင့်။ သင်တစ်ခုခုတင်သည့်အခါပရိသတ်အများဆုံးအရေအတွက်ကိုသင်မြင်ချင်လိမ့်မည်။ သင်၏လက်လှမ်းမီမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အချိန်ပို့စ်တင်ရန်စဉ်းစားပါ။ ပို့စ်တင်စဉ်မှတ်မိရမည့်အဓိကအချက်တစ်ခုမှာအချိန်ဖြစ်သည်။ လူအများအပြားတက်ရောက်နိုင်ရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တက်ကြွစွာတက်ကြွနေသည့်အခါတင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ပတ်၏ပုံမှန်နေ့၌ ၆ နာရီမှ ၇ နာရီအထိ Facebook သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့အလုပ်နှင့်ပညာရေးကနေအခမဲ့ရ။ သူတို့ကကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်နေရင်းအသစ်အဆန်းတွေကိုစစ်ဆေးကြတယ်။
အချို့သောအာရုံကိုဆုပ်ကိုင်! သင်၏ပရိုဖိုင်တွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရာများထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အကြီးမြတ်ဆုံးပရိသတ်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်ရောင်စုံအပြင်အဆင်များ၊ သင့်ရဲ့ post ကိုပိုမိုသိသာထင်ရှားစေရန်သင်၏သက်ဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ post ကိုတော်တော်လေးရိုးရှင်းအောင်ထားပါ။ သင်သည်စာသားအခြေပြုစာမူတစ်ခုကိုဖန်တီးနေပါက၎င်းကိုတိုတိုနှင့်ရိုးရှင်းအောင်ထားပါ။ ၎င်းကိုတိုတိုမသိမ်းဆည်းနိုင်လျှင်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုစာပိုဒ်များအဖြစ်စုစည်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ထိုသို့မအောင်မြင်ပါကသင်၏စာသားသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ လူများမှာပျင်းလာပြီးစိတ်ဝင်စားမှုပျောက်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်စာသားကိုပင်မကြည့်နိုင်ပေ။
မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်သင့်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ ကြီးစွာသောစျေးကွက်သမားဖြစ်ရန်သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်ပန်းတိုင်များကိုသွားရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်တွင်အကြောင်းအရာကောင်းကောင်းရှိရန်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ လူနေမှုပုံစံ၊ သတင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များသည်ထူးခြားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်ပြီးသည်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်လက်တွေ့တွင်ဖြစ်လာသည်။ သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကြောင်းအရာအတွက်လှုံ့ဆော်မှုကိုမည်သို့ရှာတွေ့နိုင်မည်နည်း။
သင့်ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏တုံ့ပြန်ချက်များကိုနားထောင်ပါ။ သင့်ဖောက်သည်များထံမှပို့စ်များ၊ ဖော်ပြချက်များနှင့်တံဆိပ်များကိုစစ်ဆေးပြီးသူတို့၏မေးမြန်းချက်များကိုဖြေဆိုရန်သေချာပါစေ။
သင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကြည့်ပါ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်၏ Facebook စာမျက်နှာများကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ပါ။ သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခင်းအကျင်းတွေကိုမှတ်သားပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကြိုးစားလုပ်ပါ။
သက်ဆိုင်ရာ Hashtags ကိုသုံးပါ။ Twitter, Instagram, Pinterest, hashtags အမျိုးမျိုးကိုခြေရာခံပြီးသင့်အမှတ်တံဆိပ်အတိုင်းစာရင်းပြုလုပ်ပါ
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သီးသန့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုလိုက်နာပါ။ သူတို့၏ဘလော့ဂ်များကိုဖတ်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်သူတို့ဘာလုပ်သည်ကိုရှာဖွေပါ။ သူတို့သည်သင်၏နည်းဗျူဟာနှင့်ကိုက်ညီပါကသင်ပိုကောင်းစွာစာရင်းသွင်းပါ။
နယ်ပယ်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာပါ။ လူမှုရေးကွန်ရက်များဖြစ်သော Reddit နှင့် Slideshare နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ပရိုမိုးရှင်းများထည့်ပါ။ အရောင်းမြှင့်တင်မှုများသည်သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာသစ်များတွင်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကုမ္ပဏီများသည်အရောင်းမြှင့်တင်မှုကိုအပတ်စဉ်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အသုံးပြုကြသည်။
memes ကိုသုံးပါ ဟုတ်တယ်၊ Memes သည်အကြိုက်ဆုံးနှင့်ဝေမျှရန်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်သင် memes များ ဖန်တီး၍ မျှဝေနိုင်သည်။ ဤတွင်ဥပမာအချို့ဖြစ်သည်။ Quickmeme, imgflip ။
ပုံများနှင့် infographics ကိုသုံးပါ။ ရုပ်ပုံများကိုစာသားအကြောင်းအရာများထက်ကြိုက်နှစ်သက်မှု ၅၃% ပိုရသည်ဟုလူသိများသည်။ သင်၏စီးပွားရေးစာမျက်နှာအရပုံများကိုအလိုအလျောက်ခွဲခြားရန်ဂူဂဲလ်ပုံရိပ်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မဟုတ်ပါကအခမဲ့ဓါတ်ပုံများအတွက် Flickr, pixels နှင့် Unsplash ကိုသုံးနိုင်သည်။
Facebook သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘီလီယံနှင့်ချီသောအသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုသင့်အားစီးပွားရေးဖြစ်ရပ်အသစ်များနှင့်နေ့စဉ်သတင်းများကိုစားသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်လည်းအဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားစီးပွားရေးစျေးကွက်နှင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာများ၊ ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းပို့သည်။ ခင်ဗျား Facebook ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။ ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုကမ္ဘာအနှံ့သတင်းအချက်အလက်များတင်ပို့ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းပြုလုပ်ရန်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်မည်သို့မျှဝေမှုပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအလွန်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်။ သင်၏ပို့စ်များပေါ်ရှိ privacy settings များကိုသင်ပြောင်းလဲသောအခါ၊ Facebook သည်နောက်တစ်ကြိမ်တင်သည့်အခါတိုင်းဤချိန်ညှိချက်များကိုလေ့လာပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ထပ်တူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်ထပ်ခါထပ်ခါလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ မျှဝေပါဆက်လက်ကြီးထွားလာ!
အများပိုင်သတင်း Facebook က Facebook ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု Facebook ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
Saadiya Munir သည်လူမှုရေးချန်ပီယံဘလော့ဂါနှင့်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ သူမသည်စာဖတ်သူများအားဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ကူညီပေးသည်။